10 Deyn Ganacsi oo u Fiican BadCredit -ka Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 10 Deyn Ganacsi Oo U Fiican BadCredit
10 Deyn Ganacsi Oo U Fiican BadCredit
Haddii aad rajeyneyso inaad hesho heshiisyo amaah oo ka fiican, waxaad u baahan tahay inaad dhaliso ugu yaraan 670 dhibco FICO. Dhibco kasta oo ka hoosaysa dhibcaha 670 FICO guud ahaan waxaa loogu yeeraa dhibcaha amaahda oo caddaalad ah ama xun. Si aad ugu qalanto deyn ganacsi oo xun, waxaad u baahan tahay ugu yaraan 530 dhibco FICO.
Milkiilayaasha meheradaha leh dhibcaha dhibcaha xun guud ahaan waxay ku tiirsan yihiin amaahda ganacsiga sumcadda xun si ay dhaqaale ugu helaan ganacsigooda.
Markay timaado helitaanka amaahda, xitaa dhibcaha dhibcahaaga ganacsiga ayaa muhiim u ah go'aaminta aayahaaga, gaar ahaan kuwa amaahiyayaasha dhaqameed. Sida dhibcaha dhibcahaaga shaqsiyeed, ganacsigaagu wuxuu kaloo leeyahay habab dhibco u gaar ah iyo kala soocid.
Dhibcaha dhibcaha ganacsigu waa milicsiga taariikhda lacag -bixinta ganacsiga ee la xidhiidha xisaabaadka la xidhiidha ganacsiga.
Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado helitaanka amaahda ganacsiga, amaahiyayaashu waxay inta badan ku tiirsan yihiin dhibco shaqsiyeed si loo go'aamiyo amniga amaahda ee ganacsiyada bilowga ah ee aan lahayn taariikh deyn.
Suuragal ma tahay in la helo Amaah Ganacsi Yar oo leh Deyn Xun?
In kasta oo ay suurtogal tahay in la helo amaah ganacsi oo yar oo leh dhibco xun ama hooseeya, ikhtiyaarradu inta badan way xaddidan yihiin oo way ku adag yihiin kuwa amaah bixiyayaasha dhaqanka ah. Markay timaado ansixinta amaahda ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah, hannaanku wuxuu noqon karaa mid dhib badan.
Arrimo ay ka mid yihiin qulqulka lacagta caddaanka ah ee shirkadda iyo qiimaha dammaanadda shirkadda ayaa u imanaya inay ciyaaraan.
Xaqiiqdu waxay tahay, way fududahay in go'aan la gaaro marka deyn -bixiyuhu yeesho qulqul lacag caddaan ah iyo il dakhli oo joogto ah.
Milkiilayaasha meheradda leh qulqul aan degganayn ama dakhligoodu aad u hooseeyo, inta badan waa caado in deyn -bixiyeyaashu ay fiiro gaar ah u yeeshaan diiwaannada maaliyadeed ee diiwaangashan iyo hantida. Shirkadaha noocan ahi waxay yeelan karaan xoogaa dhibaatooyin ah oggolaanshahooda deynta.
Dhinaca kale, kuwa leh dhibcaha dhibcaha wanaagsan waxay si fudud u heli karaan amaahda amaah -bixiyeyaasha dhaqanka iyo kuwa kaleba.
Dhibcaha dhibcaha wanaagsan ayaa waliba kuu qalmi kara Amaahda Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka.
Akhri: Amaahda Amaahda | Tusaha Khubarada
Amaah noocee ah ayaad ku heli kartaa dhibco xun?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah amaahda ganacsiga yaryar oo aad ku heli karto dhibco xun. In kasta oo qaarkood si sahlan loo heli karo, haddana waxaa jira kuwo kale oo leh habraacyo aqoonsi oo adag.
Deyn -bixiyeyaal badan oo kale ayaa diyaar u ah inay bixiyaan amaahda ganacsiga yaryar shirkadaha leh dhibcaha dhibcaha xun.
Deyn-bixiyeyaasha kale waxay tixraacaan amaah-bixiyeyaasha baaxadda leh, oo ay ku jiraan amaah-bixiyeyaasha isku-filnaanshaha ee internetka oo si madax-bannaan uga shaqeeya hay'adaha ganacsiga dhaqameed.
Waxay u dhaqmaan sidii buundo u dhaxaysa deyn -bixiyeyaasha oo laga yaabo inay la kulmaan diidmo sababo la xiriira dhibco xun iyo arrimo kale oo ay leeyihiin hay'adaha maaliyadeed ee dhaqameed. Markii uu faafay masiibada, deyn -bixiyeyaal badan ayaa adkeeyay helitaanka deymaha iyagoo kordhiyay heerarka amaahda.
Guud ahaan, deyn-bixiyeyaal badan oo kale ayaa ku sameeya macaamilkooda internetka iyagoo aan lahayn laan jireed-sida dhiggooda-amaahiyeyaasha dhaqameed.
Sidaa darteed, helitaanka deymaha badiyaa waa dhakhso oo walwal badan. Qaar ka mid ah qaababka amaahda ee amaahiyayaashu ay siiyaan shirkadaha leh dhibcaha dhibcaha xun waa:
1. Amaahda Muddada Ganacsiga
Amaahda muddada ganacsiga ayaa sida caadiga ah ku leh dulsaarka ugu yar/ugu badan ee lacagaha uu heli karo deyn -bixiyuhu.
Amaahda muddada ganacsiga waa qaddar lacag ah oo ganacsigu ka amaahiyo deyn -bixiye wuxuuna ku bixiyaa boqolkiiba cayiman khidmadda muddo go'an.
Waxaa jira laba nooc oo ah amaahda muddada ganacsiga, ammaan ah iyo amaahda muddada aan la hubin. Markaad codsaneyso deyn ganacsi oo sugan, deyn -bixiyuhu wuxuu ka rabaa dammaanad shirkadda ama maamulaha shirkadda.
2. Khadka Amaahda Amaahda
Khadka ganacsiga ee amaahda ayaa leh waxyaabo badan oo la mid ah kaararka amaahda ganacsiga. Waxay faa'iido u leeyihiin kordhinta socodka lacagta caddaanka ah waxayna caawiyaan socodsiinta hawl maalmeedka ganacsiga.
Khadka ganacsiga ee amaahda ayaa sidoo kale loogu yeeraa khadadka soo noqnoqda ee dhibcaha.
Khadka ganacsiga ee amaahdu wuxuu ku yimaadaa dabool min iyo ugu badnaan la heli karo. Khadka ganacsiga ee amaahda ayaa sidoo kale soo jiidata xiisaha.
Akhri: 10 Tallaabo oo Wax -ku -ool ah si aad u hesho Amaah Ganacsi
3. Amaahda Qalabka
Amaahda qalabka ayaa waxtar u leh maalgelinta gadashada qalabka ganacsiga, cusboonaysiinta kirada, iibsashada kombiyuutarada shaqada ee cusub, iwm.
Deyntaani waxay ka caawin kartaa shirkadaha yaryar iyo kuwa bilowga ah inay bixiyaan ilaa 100% qiimaha qalabka. Qalabka laftiisu wuxuu dammaanad ka noqonayaa lacagta.
Way sahlan tahay in la helo deyn noocan oo kale ah oo laga helo amaah -bixiyeyaasha kale marka loo eego amaahiyeyaasha dhaqameed haddii aad leedahay dhibco dhibco oo liidata.
4. Maalgelinta Qaansheegta/Xisaabinta
Ganacsiyada yaryar ee la halgamaya qulqulka lacagtooda sababtuna tahay habdhaqanka lacag -bixinta ee macmiilka saboolka ah, maalgelinta qaansheegtu waa hab wanaagsan oo lagu heli karo amaahda si ay shirkaddu u shaqeyso iyadoo la sugayo macaamiisha inay bixiyaan dheelitirka.
Isku soo wada duuboo, maalgelinta qaansheegta micnaheedu waa inaad ku bixisaa qaansheegtaada dammaanad ahaan qiimo dhimis si aad u hesho deyn ganacsi oo yar shirkaddaada.
Deyn -bixiyuhu wuxuu bixiyaa qaddar boqolkiiba ah oo ay macaamiishu kugu leeyihiin qaansheegyadaada inta uu hayo boqolkiiba inta wadarta ilaa wadarta qaansheegta ay macaamiishu bixiyaan.
Maalgelinta qaansheegta inta badan ma aha doorashada ugu fiican ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah maaddaama dulsaarka dulsaarku badan yahay oo deyn-bixiyayaasha waxaa laga rabaa inay bixiyaan khidmad-soo-saare iyadoo ku xiran boqolkiiba qaansheegta. Waxaa jira dhowr arrimood oo halis ah oo la xiriira qaan -sheegidda/ maalgelinta qaansheegta.
Sidaa darteed, haddii aad tahay ganacsi yar ama bilow ah, waxaad u baahan tahay inaad miisaamto faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka hor intaadan dalban deynta noocan ah.
5. Horumarka Lacagta Ganacsatada (MCA)
Horumarka lacagta caddaanka ah ee baayacmushtarigu waa mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsiyaha badan ee loo helo maaliyad ganacsi, gaar ahaan ganacsiyada yaryar ee leh dhibco xun.
Horumarinta lacagta caddaanka ah ee ganacsigu waa qaddar hore oo aad ka hesho saadaasha iibka mustaqbalka ee shirkaddaada. Xaaladaha badankood, amaahda noocan ahi waxay u baahan tahay inaad ku bixiso boqolkiiba inta kaarkaaga deynta maalinlaha ah iyo rasiidhada kaarka deynta.
Si erayada loo kala horeeyo, dib u bixinta daynta noocan ahi waxay bilaabmaysaa isla marka aad hesho lacagta.
Horumarinta lacagta caddaanka ah ee ganacsigu waxay yeelan kartaa cawaaqib maaliyadeed oo muddo dheer ah sidaas darteedna, waa ikhtiyaar deyn oo liidata oo lagu maalgeliyo ganacsigaaga.
Toban Goobood Oo Lagu Helo Amaahda Ganacsi Ee Ku Fiican Dhibcaha Xun
Haddii aad la yaabban tahay sida loo helo amaahda ganacsiga, gaar ahaan haddii aad leedahay dhibco dhibco dhibco ah, hoos waxaa ku yaal toban amaah ganacsi oo yaryar oo ugu fiican shirkadaha bilowga ah.
#1. Upstart | Ugu Fiican Shirkadaha Bilowga ah ee leh Taariikhda Dhibcaha Xaddidan
Dhibcaha dhibcaha: 600
Qiyaasta APR: 4.37-35.99%
Lacagta amaahda: $ 1,000 in $ 50,000
Waqtiga maalgelinta: 1 ilaa 2 maalmood oo shaqo gudahood
Muddada muddada amaahda: 3 in 5 sano
Dakhli sanadeedka ugu yar: $ 12,000 (dakhliga guud)
Khidmadaha kale: ajuurada asalka - laga bilaabo 0% ilaa 8% | khidmadda dambe = 5% ama $ 15 (waxay ku xiran tahay hadba inta ay le'eg tahay) | lacagtii jeegga la soo celiyay = $ 15 | dokumentiga warqadda ah ee mar keliya = $ 10
Markay timaado xaqiijinta amaahda degdegga ah iyada oo aan dammaanad u ahayn meheraddaada, Upstart waxay dhistay sumcad ah inay ugu sarreyso xulashooyinka amaahda. Amaahda Upstart APRs waxay ka bilaabataa 4.37 ilaa 35.99%, iyadoo ku xiran gobolka.
Lacagta la heli karo waa ugu yaraan $ 1,000 illaa ugu badnaan $ 50,000. muddada lacag -bixinta sidoo kale waa mid dabacsan. Waxaad dooran kartaa inaad dib u bixiso muddo saddex ilaa shan sano gudahood ah.
In kasta oo deyn -bixiyeyaal badan ay xoogga saaraan dhibcaha amaahda ee meheradda iyo maamulaha, Upstart waxay eegtaa asalka waxbarashada, taariikhda shaqada, iyo aagga maamulaha ee takhasuska si ay go'aan uga gaaraan arjiga amaahda.
Lacagaha Upstart waxaa lagu bixiyaa 2 maalmood oo shaqo gudahood codsadayaasha u qalma. Sidoo kale ma jiraan cawaaqib hore u -bixin ah ee deynta Upstart.
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in amaahda Upstart ay soo jiitaan khidmad asal-deyn ah oo hal mar ah. Lacagtu waxay noqon kartaa ilaa 8% qaddarkii amaahdii asalka ahayd ee shirkad la siiyay.
Lacag -bixinta dambe ayaa sidoo kale soo jiidata kharashyada qaarkood iyo sidoo kale jeegagga la soo celiyay. Codsadayaasha amaahda Upstart ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay bixiyaan khidmadda dukumintiga.
Si aad u noqotid u qalma amaahda Upstart, codsadayaashu waa inay lahaadaan cinwaan deggenaansho oo Mareykan ah, marka laga reebo kuwa ku jira adeegga milatari ee firfircoon, faahfaahinta koontada bangiga shaqsiga oo leh lambarka waddada Mareykanka ayaa sidoo kale muhiim ah, iwm.
Maadaama Upstart aysan ku tiirsanayn oo keliya dhibcaha dhibcaha si loo qiimeeyo amaah -bixiyeyaasha, shirkadaha leh dhibcaha dhibcaha xun waxay u istaagi doonaan fursad wanaagsan inay oggolaansho ka helaan amaahdooda.
#2. Hal Maaliyadeed oo Muhiim ah | Ugu Fiican Amniga Amaahda
Dhibcaha dhibcaha: lama sheegin
Qiyaasta APR: 18-35.99%
Lacagta amaahda: $ 1,500 in $ 20,000
Waqtiga maalgelinta: 1 ilaa 3 maalmood gudahood
Muddada muddada amaahda: 24 ilaa bilaha 60
Dakhli sanadeedka ugu yar: Lama sheegin
Lacagaha kale: khidmadaha asalka - laga bilaabo $ 25 illaa $ 400 ama 1% ilaa 10% | Lacagta dambe = $ 5 illaa $ 30 ama 1.5% ilaa 15% ee lacag bixinta billaha ah ama qaybta khaldan. | Lacagta maaliyadaha oo aan ku filnayn: $ 10 ilaa $ 50.
One Main Financial wuxuu bixiyaa amaahyo sugan iyo kuwo aan la hubin labadaba. Mid ka mid ah amaahda la hubo ee Maaliyadeed ee Maaliyadeed ayaa u baahan deyn -bixiyuhu inuu bixiyo dammaanad, oo noqon kara baabuur ama wax kale oo qiimo leh.
Shirkadaha yaryar iyo kuwa bilowga ah waxay ka heli karaan $ 1,500 illaa $ 20,000 APR-yada oo u dhexeeya 18% ilaa 35.99% dhererka muddada dabacsan. Waxaad dooran kartaa midkood 24, 36, 48 r 60 bilood.
Si ka duwan deyn bixiyeyaal badan, One Main Financial wuxuu bixiyaa amaahyo sugan iyo kuwo aan la hubin labadaba, taas oo macnaheedu yahay in kuwa wax amaahiya ee aan ku guulaysan amaah -bixiyeyaasha kale ay fursad fiican la haystaan.
One Main wuxuu kaloo bixiyaa oggolaansho deyn degdeg ah. Ogolaanshaha amaahda iyo bixinta maaliyaddu inta badan waxay qaadataa hal ilaa saddex maalmood. Hal Maaliyadeed oo Maaliyadeed ayaa sidoo kale leh in ka badan 1,500 xafiisyo jireed oo loogu talagalay kuwa doorbida wax ka qabashada dhismayaasha jirka.
Markaad isticmaasho One Main Financial services, waxaad bixin doontaa khidmadda asalka ah oo ku kala duwan goobtaada (gobolka aad ku nooshahay).
Gobollada qaarkood, khidmadda asalka ahi waxay ku timaadaa qaab go'an, oo u dhexaysa $ 25 illaa $ 400. Dawladaha kale waxay ka qaadaan boqolkiiba wadarta guud ee amaahda. Marka laga hadlayo boqolkiiba, qiimuhu wuxuu noqon karaa mid hooseeya ilaa 1% iyo in ka badan 10%.
Maaddaama One Main Financial uu bixiyo ikhtiyaarka amaahda sugan, deyn -bixiyayaasha leh sumcad xun waxay ka fogaan karaan noocyada kale ee qaaliga ah ee amaahda sida daymaha bixinta.
#3. Avant | Ugu fiican xulashooyinka kala bixinta deynta kala duwan
Dhibcaha dhibcaha: FICO 580, Vantage 550
Qiyaasta APR: 9.5-35.99%
Lacagta amaahda: $ 2,000 in $ 35,000
Waqtiga maalgelinta: maalinta xigta codsiga kadib
Dakhli sanadeedka ugu yar: Dakhliga saafiga ah ee billaha ah ee $ 1,200 (oo ay kujirto kasbashada aan laga helin shaqo sida alimony)
Lacagaha kale: Khidmadaha maamulka: ilaa 4.75%| Khidmadaha soo daahay: $ 25 (haddii aan bil walba lagu bixin 10 maalmood gudahood ka dib marka la dhaafo taariikhda loo qabtay) | Khidmadda lacag -bixinta ee aan sharaf lahayn: $ 15
Shuruud dheeri ah: Socodka lacag caddaan ah oo bilaash ah ugu yaraan $ 500. Saamiga deynta-dakhliga 70%, oo ay ku jirto bixinta amaahda guryaha iyo kirada.
Ganacsiyada yaryar ee raadinaya amaahyo aan la hubin, Avant ayaa ah doorashada ugu fiican. Ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah ee raadinaya sida loo helo amaah ganacsi ayaa hadda ka heli kara Avant ilaa $ 35,000, haddii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmidda.
Ma jiraan wax ciqaab ah oo horay loo bixinayo oo loogu talagalay amaahda Avant waxayna oggolaadaan muddada amaahda 24 illaa 60 bilood. Si kastaba ha ahaatee, mar hore oo aad bixisey deymahaaga ayaa ka fiican inaad ku keydiso dulsaarka. Musharrixiinta u qalma sida caadiga ah waxay helaan maalgelintooda isla maalinta xigta codsiga kadib.
Codsiga amaahda Avant wuxuu soo jiitaa khidmadda maamulka ilaa 4.75%. Waxa kale oo jira khidmad bixin dambe iyo khidmad bixin bixin aan sharaf lahayn. Sidaa darteed, waa inaad raacdaa shuruudaha kahor intaadan dalban amaahda Avant.
Akhri: Amaahda Ganacsiga Yaryar 2021 Taas oo Ku habboon Ganacsigaaga
#4. Bangiga TD | Wuxuu ku fiican yahay bixinta deymaha leh koofiyado hooseeya
Qiyaasta APR: 6.99-21.99%
Lacagta amaahda: $ 2,000 in $ 50,000
Waqtiga maalgelinta: hal maalin ganacsi gudahood
Muddada muddada amaahda: 36 ilaa bilaha 60
Dakhli sanadeedka ugu yar: Oo aan lagu cayimin
Lacagaha kale: khidmadaha soo daahay: 5% bixinta ku habboon ee $ 10 (waxay kuxirantahay midda yar)
Shuruudo dheeri ah: Deymaha Bangiga TD ma aha kuwo loogu talagalay kharashyada ganacsi ama waxbarasho. Si aad u hesho amaah, codsaduhu waa inuu ahaadaa 18+ sano waana inuu bixiyaa lambarka dammaanadda bulshada.
Amaahiyayaashu waxay ka heli karaan amaahda shaqsiyeed ee aan la hubin daymaha TD Fit ee Bangiga TD. Qaddarka wuxuu u dhexeeyaa $ 2,000 illaa $ 50,000 wuxuuna sidoo kale soo jiitaa noocyada khidmadaha qaarkood. Markaad codsato amaahda TD, waxaad ku heli kartaa maalgelintaada hal maalin shaqo gudaheed.
Bangiga TD ayaa laga yaabaa inuusan lahayn qiimayaasha ugu hooseeya marka laga hadlayo amaahda, daboolka amaahdooda ayaa isbarbardhig ahaan hooseeya (21.99 APR). Amaahiyayaasha, bilowga, iyo ganacsiyada yaryar ee leh dhibcaha dhibcaha ee liita waxay ka faa'iideysan karaan adeegyada TD Bank si ay ugu helaan deyn ganacsi oo yar shirkadooda.
Bangiga TD wuxuu ka qaadaa lacag dheeraad ah oo ah 5% ama $ 10 (hadba kii yar), taas oo macquul ahaan aad u hooseysa marka la barbar dhigo deyn bixiyeyaasha kale. Bangiga TD wax lacag ah kama qaado khidmadaha billaha ah ama khidmadaha hore ee deynta. Sidoo kale ma jiraan khidmado maaliyadeed oo aan ku filnayn ama khidmadaha soo daahay.
Lacagta ugu badan ee APD ee amaahda Bangiga TD soo jiidato waa qiyaastii 14%, taas oo aad uga yar inta laga heli karo deyn -bixiyeyaasha kale.
#5. Casriyeyn | Ugu fiican bixinta degdegga ah ee lacag caddaan ah
Dhibcaha dhibcaha: 560
Qiyaasta APR: 5.94-35.97% (Bixinta otomaatiga ayaa lagu dabaqi karaa)
Muddada muddada amaahda: 24 ilaa bilaha 84
Dakhli sanadeedka ugu yar: ma loo baahan yahay
Lacagaha kale: khidmadaha soo daahay: Lacagta asalka ah laga bilaabo 2.9% ilaa 8% | Lacagta soo daahday: $ 10+ | Lacagta Jeegga La Soo Celiyay: $ 10
Shuruudo dheeri ah: =/-75% saamiga deynta iyo dakhliga
Sida ugu dhaqsaha badan ee aad u heli karto lacag sida ganacsi yar ama bilow, ayaa kuu fiicnaan doonta. Taasi waa sababta kor u qaadistu ay ka mid tahay xulashada ugu fiican markaad raadineyso amaah ganacsi.
Kordhinta waxay siisaa amaah shaqsiyeed ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah, kuwaas oo u adeegi kara ujeeddada dib-u-habeynta kaararka deynta, xoojinta deymaha, iibsashada culus, iyo hagaajinta guriga.
Casriyeynta APR -yada waxay ka bilaabantaa 5.94% ilaa 35.97%. Qaddarka amaahda ee aad ka heli karto Casriyeynta wuxuu ka bilaabmaa $ 1,000 illaa $ 50,000 oo leh amaah ilaa 84 bilood ah.
Waxay bixisaa amaah degdeg ah, sida caadiga ah hal maalin shaqo gudaheeda iyada oo loo marayo habka xaqiijinta bixiyaha amaahda. Go'aanka ku saabsan dalabkaaga deynta badanaa waa ilbidhiqsiyo gudahood, kadib codsigaaga.
Ogsoonow in dhammaan amaahda shaqsiyeed ee Upgrade ay soo jiitaan khidmadda asalka ah oo u dhexeysa 2.9% ilaa 8%. Lacagta waxaa laga jarayaa wadarta deynta.
Ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah ee doonaya inay isku daraan deynta, amaahdooda waxaa toos loogu diri karaa deyn-bixiyayaashooda. Isugeynta amaahdu waxay ka caawisaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah inay diiradda saaraan dhisidda dhibcaha dhibcaha.
#6. Barta amaahda | Ugu fiican bixinta deymaha ganacsiga yaryar
Dhibcaha dhibcaha: 590
Qiyaasta APR: 9.99-35.99%
Lacagta amaahda: $ 2,000 in $ 36,500
Waqtiga maalgelinta: maalinta shaqada ee xigta
Dakhli sanadeedka ugu yar: $ 35,000
Lacagaha kale: khidmadaha soo daahay: Lacagta asalka ah ee 6%
Shuruudo dheeri ah: -50% saamiga deynta-dakhliga, ka-dhaafitaanka deyn-bixinta (dalabka lagama heli karo West Virginia iyo Nevada)
Kuwa leh dhibcaha dhibcaha ee ka hooseeya 590, Lending Point waxay fursad weyn u tahay inay ka helaan amaah aan la hubin $ 2,000 ilaa $ 36,500 oo ah 9.99% ilaa 35.99% APR. Lending Point waxay bixisaa muddada deynta oo dabacsan oo fidsan inta u dhaxaysa 24 ilaa 60 bilood.
Marka la barbardhigo deyn -bixiyayaasha kale ee leh shuruudaha amaahda adag iyo ugu yaraan $ 2,000, Lending Point waxay u oggolaaneysaa amaah -bixiyeyaasha leh sumcad xun inay helaan ugu yaraan $ 2,000.
Markaad deyn ka dalbato Lending Point, waxaad ogtahay go'aanka codsigaaga wax ka yar 1 daqiiqo. Lacagaha ayaa si caadi ah loo bixiyaa maalinta xigta kadib codsigaaga.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in la fahmo in amaahda Lending Point ay la socoto khidmadda asalka ah oo ah 6% taas oo lagu soo rogo dakhliga deynta. Barta amaahda waxay u baahan tahay dakhliga ugu yar ee sanadlaha ah $ 35,000 si aad ugu qalanto deynta.
Akhri: SIDA LOO CODSADO DEYN GANACSI OO YAR 10 TALLAABO OO FUDUD
#7. Amaahda Deymaha Xun | Ugu fiican ganacsiyada iyo dadka leh dhibcaha dhibcaha xun
Qiyaasta APR: 5.99-35.99%
Lacagta amaahda: +/-$ 10,000
Muddada muddada amaahda: Bilaha 3 ee sanadaha 6
Lacagaha kale: khidmadaha soo daahay: ma jirto khidmado dheeraad ah oo loogu talagalay adeegsiga mareegaha
Shuruudo dheeri ah: Codsaduhu waa inuu ahaadaa 18+ sano. Shuruudda buuxda waxay ku kala duwanaan doontaa mid amaah -bixiye ilaa mid kale.
Amaahda Bad Credit (Bad Credit Credit) waa shabakad amaahiyayaal iyo bixiyeyaasha adeegyada maaliyadeed. Ganacsiyada iyo shaqsiyaadka leh dhibcaha amaahda xun waxay heli karaan ilaa $ 10,000 oo ah amaahda lacagta ah ee APR laga bilaabo 5.99% ilaa 35.99%. Codsiga amaahda ee leh Deymaha Deynta ee xun waa bilaash.
Amaahda Deyn -xumada (Bad Credit Credit) waxay u dhaqantaa sidii buundo u dhaxaysa amaahiyayaasha doonaya inay amaah siiyaan deyn -bixiyeyaasha xun iyo kuwa wax -amaahda.
Sida laga soo xigtay shirkadda, habka codsigeeda ayaa u oggolaanaya ku dhawaad ​​qof kasta inuu u qalmo amaah. Sidaa darteed, waxay fursad wanaagsan u tahay kuwa leh deymaha xun ee deynta inay sidoo kale codsadaan amaahda.
Dalbashada deynta iyada oo loo marayo websaydhka rasmiga ah ee Amaahda Deyn -xumada ma soo jiito wax khidmad ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa lama huraan ah in la xuso in Amaahda Deynta Baddu aysan ahayn amaahiye.
Shirkaddu waxay u adeegtaa oo kaliya xiriir ka dhexeeya bixiyeyaasha adeegga maaliyadeed (amaahiyaha) iyo macaamiisha (amaahda). Sidaa darteed, amaahiyayaashu waa inay si taxaddar leh u maraan shuruudaha iyo amaahiyaha marka ay dalbanayaan amaah.
Dadka leh dhibcaha amaahda xun waxay u taagan yihiin fursad wanaagsan oo ay ku heli karaan amaahiye ku habboon iyada oo loo marayo Amaahda Deynta Baddan.
#8. Naadiga Amaahda | Ugu Fiican bixinta khibrad internet-ku-habboon
Qiyaasta APR: 7.04-35.89%
Lacagta amaahda: $ 1,000 in $ 40,000
Waqtiga maalgelinta: afar maalmood gudahood
Muddada muddada amaahda: 36 bilood ilaa 60 bilood
Lacagaha kale: khidmadaha soo daahay: Lacagta asalka ah: 3% | Lacagta soo daahday: 5% ama $ 15 (hadba tii ku weyn)
Shuruudo dheeri ah: DTI oo ah 40 qof hal qof iyo 35 codsi wadajirayaal
Waxaa jira hal astaamood oo gaar ah oo ku saabsan Naadiga amaahda, waa fursadda ay siiyaan kuwa amaahda leh dhibco dhibco xun si ay ula midoobaan kuwa kale si ay u hagaajiyaan dhibcahooda si ay u codsadaan amaah.
Waxaa aad u yar amaah -bixiye kasta oo fursaddan siiya dadka amaahiya. Wax-amaah-wadaagku wuxuu caawin karaa ganacsiyada yaryar ee sida caadiga ah aan u qalmin amaah si ay u noqdaan kuwo aqoon leh.
Naadiga amaahda wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo qoto-dheer oo onlayn ah oo leh adeegsi-saaxiibtinimo oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxaa jira ilo badan oo laga heli karo mareegaha iyo noocyada kala duwan ee amaahda la heli karo.
Ka sokow fursadda wax-amaahda, Naadiga Lending wuxuu u oggolaanayaa 15 maalmood oo nimco ah kuwa wax-amaahda ah oo aan ka bixin karin amaahdooda maalinta ay tahay.
Amaahda Naadiga amaahda waxay soo jiitaan lacag deyn ah 3% ilaa 6% wadarta amaahda asalka ah. Amaahiyayaashu waxay codsan karaan microloans -ka $ 1,000.
Naadiga amaahda ayaa u fududaynaya ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah inay helaan kaliya xaddiga lacagta ah ee ay u baahan yihiin ganacsigooda kana badbaadiyaan inay galaan daymo aad u badan.
Akhri: Sida Loo Noqdo Dillaal Amaah Ganacsi 2021 | Tusaha Khubarada
#9. Sanduuqa Sanduuqa | Ugu fiican khadka ganacsiga ee dhibcaha
Dhibcaha dhibcaha: ugu yaraan 500
Qiyaasta APR: laga bilaabo 4.66% (qaddarka barbaradka)
Lacagta amaahda: ilaa $ 100,000
Waqtiga maalgelinta: 1 maalmaha 2
Muddada muddada amaahda: 12 in todobaad 24
Dakhli sanadeedka ugu yar: $ 50,000
Shuruudo kale: meheraddu waa inay jirtaa ugu yaraan saddex bilood
Sanduuqa sanduuqa wuxuu siiyaa hal nooc oo maaliyad ah ganacsiyada, kaas oo ah khad ganacsi oo amaah ah. Khadka ganacsiga ee TheFundbox ee amaahda ayaa u saamaxaya ganacsiyada yaryar inay lacag ka soo qaataan khadkooda amaahda (qaddar go'an oo la oggolaaday).
Khadka amaahda ee sanduuqa ganacsiga ee sanduuqa waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka baxdo khadkaaga amaahda oo ka soo horjeeda qaansheegyada aan la bixin.
Ganacsatadu hadda waxay ku xiri karaan koontadooda Fundbox iyo barnaamijkooda xisaabaadka si ay ugu suurtogasho inay hore u helaan lacag -bixinnada, iyagoo ka soo horjeeda qaan -sheegyada aan la bixin iyagoo adeegsanaya khadka deynta.
Lacagta waxaa lagu bixiyaa laba maalmood oo shaqo gudahood musharixiinta u qalma. Dib -u -bixinta lacagaha waxaa la samayn doonaa markaad sawirto lacagtaada.
Ogsoonow haddii aad ku jirto khadka ganacsiga soo socda, uma qalantid amaahda Fundbox:
Adeegyada dadka waaweyn iyo madadaalada
Soo -saarka iyo qaybinta hubka iyo hubka
Khamaarka iyo adeegyada ciyaaraha internetka
Daroogada iyo qaybinta daroogada
Sanduuqa sanduuqa wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan gobollada Mareykanka oo ay ku jiraan dhulal la taageero. Habka codsigu wuxuu u baahan yahay in shirkaduhu leeyihiin taariikh maaliyadeed oo wanaagsan iyo koonto bangi ganacsi.
Habka dalabka ayaa sidoo kale u baahan aqoon wanaagsan oo ku saabsan softiweerka xisaabinta ee la taageeray sida:
FreshBooks (Classic iyo Cusub)
Macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan maamulaha iyo nooca meheradda ayaa sidoo kale loo baahan yahay marka la codsanayo amaahda Fundbox.
#10. Canabka Buluugga ah | Waxa ugu wanaagsan bixinta amaahda degdegga ah
Qiyaasta APR: 15% in 78%
Lacagta amaahda: $ 5,000 ilaa $ 250,000 (khadka amaahda)
Muddada muddada amaahda: 6 ilaa bilaha 12
Dakhli sanadeedka ugu yar: $ 120,000 +
Kuwa u baahan lacag caddaan ah oo degdeg ah si ay u maalgeliyaan meheraddooda, Blue Vine waa meesha ugu habboon ee loo weecan karo amaahda. Blue Vine waxay siin kartaa amaahda isla maalinta ah ganacsiyada yaryar. Lacagaha Blue Vine waxay sida caadiga ah yimaadaan dhawr daqiiqo gudahood ilaa dhowr saacadood kadib codsiga.
Vine sidoo kale waxay siisaa maalgelinta qaansheegta ganacsiyada yaryar si ay uga caawiso fududeynta caqabadaha maaliyadeed. Ganacsiyada yaryar ee leh qaansheegad aan la bixin oo ku eg 1 ilaa 13 toddobaad gudahood waxay ka dalban karaan maalgelinta qaansheegta Blue Vine waxayna heli karaan lacag -bixinta hore 85% ilaa 90% wadarta qaansheegta.
Boqolkiiba reaming -ka ayaa la bixin doonaa ka dib markay macaamiishu bixiyaan qaansheegta (ka dib marka laga jaro kharashaadka).
In kasta oo dhibcaha liita ay caqabad ku noqon karaan helitaanka maaliyadda, Blue Vine ayaa sidoo kale ku tixgelin kara xitaa haddii aad ka hooseyso dhibcaha dhibcaha 630. Waxay tixgeliyaan socodka lacagta caddaanka ah ee meheraddaada iyo ka -haynta macmiilkaaga kuwa codsanaya maalgelinta qaansheegta.
Akhri: Faallooyinka Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn 2021
Deyn -bixiyeyaasha kala duwan waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan xitaa shirkadaha iyo shaqsiyaadka leh dhibcaha dhibcaha xun.
Sidaa darteed, ogaanshaha sida loo helo amaah ganacsi yar, gaar ahaan haddii aad leedahay dhibco dhibco xun ayaa aad muhiim u ah. Bilowga ama meheradda yar-yar, baahiyaha lacagtu marmar ayay soo baxaan, taas oo caqabad ku noqon karta socodka caadiga ah ee ganacsiga.
Ka sokow daryeelka baahiyaha ganacsiga aasaasiga ah, waxaa jira amaahyo yaryar oo kaa caawiya daryeelka baahiyaha shaqsiyeed, inta aad xoogga saareyso habsami u socodka ganacsigaaga.
Dad badani waxay u muuqdaan inay ka xishoodaan amaahda sababtuna tahay dhibcaha dhibcaha ee xun, laakiin taasi waa inaysan sidaas noqon. Xitaa dhibcaha dhibcaha ee xun, weli waxaa jira rajo xagga dalabka amaahda ah markaad ogaato meesha saxda ah ee aad codsan karto.
Dib -u -maalgelinta Amaahda Ardayga: Sida ay U Shaqeyso
Ardeyda Ugu Fiican Amaahda Lacag -Celinta 2021
Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2021
EINz lumay: Sida Loo Helo Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga/Lambarka EIN
15 Kaararka Amaahda Ugu Fiican ee Badbaadada Loogu Talagalay Deynta Xun 2021
10 Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis
Waa maxay shirkadda amaahda warshadaha? Beddelka heshiiska kirada ee muddada dheer jiray ee shirkadaha doonaya inay ku biiraan bangiyada iyo kuwa la xiriira…
Elfi vs Sofi 2022: Deyn Bixiye Amaah Ugu Fiican | Hagaha buuxa
Marka loo eego Nerdwallet, wadarta deynta deynta ardayga ee Mareykanka waa $1.67 tiriliyan, iyo 2018 ardayda ka qalin jabisay kulliyadda oo leh deyn…
Waa Maxay Amaahda PPP? Guudmarka, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Ganacsiyo badan ayaa dakhligoodii ku waayey xiritaanka Covid-19 waana inay iska joojiyaan shaqaale badan. Dakhliga ayaa la joojiyay…
15 Siyaabood Oo Amaah Lagu Helo Amaah Xun
Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay 15 siyaabood oo lagu helo deyn leh credit credit 2022. Aan bilowno.…
Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022
Upstart waa madal wax amaahisa oo waliba adeegsata waxa aad ugu yeerto "A. Aniga sidoo kale loo yaqaan…
Inta badan, dadku waxay ku fekeraan inay bilaabaan ganacsi laakiin ma jirto wax raasamaal ah. Waxaan…